China 3D Fiberglass Woven Fabric mpanamboatra sy mpamatsy | Beihai Fiberglass
Ny lamba spacer 3-D dia misy habaka lamba voatenona bi-directional roa, izay ampifandraisina amin'ny mekanika miaraka amina fantsona vita amin'ny volo mitsangana.
Ary misy antontam-bato miendrika S roa mitambatra mba hananganana andry iray, miendrika 8 amin'ny làlan'ny vala ary miendrika 1 amin'ny làlan'ny karatra.
Ny lamba spacer 3-D dia misy habaka lamba voatenona bi-directional roa, izay ampifandraisina amin'ny mekanika miaraka amina fantsona vita amin'ny volo mitsangana. Ary misy antontam-bato miendrika S roa mitambatra mba hananganana andry iray, miendrika 8 amin'ny làlan'ny vala ary miendrika 1 amin'ny làlan'ny karatra.
Ny lamba spacer 3-D dia azo vita amin'ny fibre vera, fibre carbon na fibre basalt. Ary koa ny lamba hybrid azy ireo dia azo hamokarana.
Ny halavan'ny haavon'ny andry: 3-50 mm, ny sakany amin'ny haben'ny: ≤3000 mm.
Ny volavolan'ireo masontsivana momba ny firafitra ao anatin'izany ny hakitroky ny faritra, ny haavony sy ny hakitroky ny tsangantsangana dia miovaova.
Ny fitambaran-damba spacer 3-D dia afaka manome fanoherana ny fihodinan'ny hoditra avo lenta sy ny fanoherana ny fiantraikany ary ny fanoherana ny fiantraikany, ny lanja maivana. avo henjana, insulated hafanana tena tsara, fanalefahana akustika, sns.
3D Fiberglass tenona lamba famaritana
Faritra mavesatra (g / m2)
Hatevina fototra (mm)
Density ny Warp (faran'ny / cm)
Hakitroky ny fanenomana (faran'ny / cm)
Herin-tady Warp (n / 50mm)
Tanjaka herinaratra fanenomana (n / 50mm)
FAQ an'ny lamba volom-boasary 3D beihai 3D
1) Ahoana no ahafahako manampy sosona sy fitaovana hafa amin'ny lamba Beihai3D?
Azonao atao ny manisy fitaovana hafa (CSM, roving, foam sns) lena amin'ny lena amin'ny lamba Beihai 3D. Ny vera hatramin'ny 3 mm dia azo ahodina amin'ny Beihai 3D lena alohan'ny faran'ny fotoam-pahavitana ary ny herin'ny lohataona feno dia azo antoka. Aorian'ny lamin'ny fe-potoana gel dia azo laminated.
2) Ahoana ny fametahana laminate haingon-trano (oh: HPL Prints) amin'ny lamba Beihai 3D?
Ny laminate haingon-trano dia azo ampiasaina amin'ny lafin'ny bobongolo ary ny lamba dia voahosotra mivantana eo ambonin'ilay lamina na ny laminaty haingon-trano dia azo ahodina eo ambonin'ny lamba Beihai 3D lena.
3) Ahoana ny fomba fanaovana zoro na fiolahana amin'ny Beihai 3D?
Ny tombony iray an'ny Beihai 3D dia ny endriny feno sy azo avela. Aforeto fotsiny ilay lamba amin'ny zoro irina na ny fiolahana ao anaty lasitra ary ahodina tsara.
4) Ahoana no ahafahako mandoko ny laminate Beihai 3D?
Amin'ny alàlan'ny fandokoana ny resina (ampidiro loko io)
5) Ahoana no ahazoako manana faritra malama eo amin'ny laminaty Beihai 3D toy ny faritra malama amin'ny santionanao?
Ny ambonin'ireo santionany dia mitaky bobongolo mihosin-malama, izany hoe vera na melamine. Raha te-hahazo malamalama malefaka amin'ny lafiny roa, dia azonao atao ny manisy bobongolo miolaka faharoa (bobongolo clamp) amin'ny Beihai 3D lena, raisina ny hatevin'ny lamba.
6) Ahoana no ahazoako antoka fa mihombo tanteraka ilay lamba Beihai 3D?
Azonao atao ny milaza mora amin'ny haavon'ny mangarahara raha nesorina tsara ny Beihai 3D. Sorohy ny faritra mavesatra (fampidirana) amin'ny alàlan'ny fanodinana fotsiny ny resina tafahoatra amin'ny sisiny sy amin'ny lamba. Io dia hamela ny haben'ny resina sisa tavela ao anaty lamba.
7) Ahoana no hialako amin'ny print-through amin'ny gelcoat an'ny Beihai 3D?
• Ho an'ny ankamaroan'ny rindranasa, voaly na sosona tsotra an'ny CSM dia ampy.
• Ho an'ny fampiharana sary mitsikera kokoa, azonao atao ny mampiasa palitao fanakanana manakana.
• Fomba iray hafa ny famelana ny hoditra ivelany hanasitrana alohan'ny hanampiana ny Beihai 3D.
8) Ahoana no ahazoako antoka fa ny translucency ny laminate Beihai 3D?
Ny translucency dia vokatry ny lokon'ny resin, mifandraisa amin'ny mpamatsy resin anao.
9) Inona no anton'ny fiakarana (lohataona aoriana) fahaizan'ny lamba Beihai 3D?
Beihai 3D Glass Fabric dia natao tamim-pahakingana manodidina ny toetra voajanahary fitaratra. Ny vera dia azo atao "miondrika" fa tsy azo foronina. Alao an-tsaina izany loharano rehetra manerana ny laminaty manosika ny mpanao damaody izany, ny resina dia manentana ity hetsika ity (antsoina koa hoe capillarity).
10) Ny lamba Beihai 3D dia tsy manasitrana tsara, inona no tokony ataoko?
Vahaolana roa azo atao
1) Rehefa miasa miaraka amin'ny resins misy styrene, ny fidiran'ny styrene miovaova miaraka amin'ny Beihai 3D tsy mihontsona dia mety hiteraka fihenan'ny fitsaboana. Ny karazana resin ((es) styrene emission (LSE) ambany) na koa ny fampidinana ny reducer emission styrène (ohatra, Byk S-740 ho an'ny polyester sy Byk S-750) dia apetraka amin'ny resin.
2) Mba hanonerana ny ambany resin be dia be ary hampihena ny mari-pana fanasitranana ao amin'ny kofehy mitsivalana mitsivalana dia asaina fanafody mihetsika be. Izy io dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny haavon'ny catalyst mitombo ary miaraka amin'ny ambaratonga mihamitombo (tsara kokoa ny catalyst) izay onitra miaraka amin'ny inhibitor mba hametrahana ny fotoana gel.
11) Ahoana no ahafahako misoroka ny fahasimbana eo amin'ny kalitaon'ny Beihai 3D (ketrona sy mivalona amin'ireo mpanao birao)?
Ny fitehirizana dia zava-dehibe amin'ny fahazoana antoka ny kalitao: tahirizo mitsivalana amin'ny horonan-tany maina ny horonan-taratasy amin'ny mari-pana ara-dalàna, esory tsara ny lamba ary aza aforeto ny lamba.
• Aforeto: azonao esorina ny valaka amin'ny alàlan'ny fanolorana moramora ny roller amin'ny vala rehefa mihorona eo akaikiny
• Miketrona: ny fihodinana moramora ambonin'ilay ketrona dia hanjavona tsotra izao
Teo aloha: 3D FRP Panel misy resina
Manaraka: Woven Roving Combo Mat
Lamba tenona vita amin'ny fibre vera 3d
Lamba tenona 3d
Lamba vita amin'ny fibre vita amin'ny vera 3d